ब्रोकली र एप्पल क्रीम - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
ब्रोकली र एप्पल क्रीम
Cremas40 मिनेट6 व्यक्ति160२ क्यालोरी
धेरै नरम, एक असाधारण बनावटको साथ र सम्पत्तीहरूले भरिएको। यो सरल क्रीम छ स्याउ सहित ब्रोकोली जुन म तपाईंलाई तयारी गर्न प्रोत्साहित गर्छु।
तर पहिले ... दिनचर्यामा फिर्ता, भ्यालेन्सियाको त्यो बिजुली यात्रा पछि, म हामीसंग आएका मानिसहरूलाई धन्यवाद दिन रोक्न चाहन्न पाक कला देखाउनुहोस्। तपाईको कम्पनीबाट रमाईलो मान्नु भएको थियो र व्यक्तिगत रूपमा हाम्रा पाठकहरूसँग भेट गर्नु आनन्दको कुरा हो। खैर, रोजा, तपाईंको मायाको लागि धन्यवाद।
यसले मलाई मेरो सहकर्मीहरूसँग भेट्न र भेट्न मद्दत पुर्‍यायो मेराके तपाईं विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ कि years बर्ष सँगै काम गरे पछि हामीले व्यक्तिगत रूपमा भेट्यौं। तपाईं र मेरो बिचमा ... यो एक मायालु हो।
र यो अनुच्छेद पछि कि मैले तपाईंलाई जारी गरेको छु, म नुस्खाको साथ जाँदैछु। यदि तपाईले याद गर्नुभयो भने, म कपालमा कपाल पनि खान्दिन मानजाना, त्यसैले म सबै राख्छु pectin र मैले बुझें कि प्यूरीसँग एउटा नेत्रत्रीय बनावट छ।
1 ब्रोकली र एप्पल क्रीम
ब्रोकली, स्याउ र आलुको साथ बनेको एउटा अपवादात्मक बनावटको साथ महीन क्रीम। र यदि हामीले क्रिची टोस्टसँग यसको सेवा दियौं भने ... यो अपूरणीय हुनेछ!
ब्रोकली को 250०० ग्राम
पिलिएको आलुको २280० ग्राम
१२० जी एप्पल, cored र unpeeled
केही अजमोदका पातहरू
हामीले गिलासमा तेल र प्याज राख्यौं। हामी प्रोग्राम १ मिनेट, भेरोमा तापमान, गति 1। अर्को हामी कार्यक्रम १ minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति १.
बन्चमा ब्रोकोली, खुलीको आलु र टुक्राहरू, स्याउ टुक्रामा, दूध र पानी थप्नुहोस्। बीकर समातेर हामीले मेशिनलाई v मा राख्यौंseconds सेकेन्डको लागि गति। हामी पछि तालिका बनाउँछौं Minutes० मिनेट, १००º, चम्चा गति र हामी गब्लेटको सट्टा महल राख्यौं।
समयको अन्तमा, हामी तापमान ड्रप हुनको लागि केही बेर पर्खन्छौं। हामी नुन र ग्रेटेड जायफल जोड्दछौं। हामी प्रोग्राम Seconds सेकेन्ड, गति 20, सधै कचौरामा पक्रेर यसलाई समातेर।
हामी टोस्टको टुक्राहरू र केही अजमोदका पातहरूको साथ क्रीम सेवा गर्दछौं।
थप जानकारी - PMayra Fernández Joglar को प्रोफाइल, मीठो रोटी र स्याउ
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: स्वस्थकर खाना, सूप र क्रिम, भेगन, शाकाहारी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » विशेष व्यंजनहरु » स्वस्थकर खाना » ब्रोकली र एप्पल क्रीम
निलो पिक्सी भन्यो
नमस्कार, कसैले मलाई कसरी चाउचाउ सुपको लागि थर्मोमिक्समा बनाउने नूडल सूप कसरी बनाउने भनेर बुझाउन सक्छ
निलो पिक्सीलाई जवाफ दिनुहोस्
हामी तपाईंलाई यो मनपराउँछौं कि हेरौं: https://www.thermorecetas.com/receta-thermomix-caldo-de-pollo/
वेबमा बधाई छ। एउटा प्रश्न: के तपाईं स्याउ हटाउन सक्नुहुन्छ? त्यो अवस्थामा, के तपाइँलाई केहि थप स्याउ राख्नु पर्छ जस्तो लाग्छ? धन्यबाद
हो, यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने तपाइँ यो बिना गर्न सक्नुहुन्छ। अधिक ब्रोकोली (यदि तपाईंलाई यो भेजी मनपर्दछ) वा अधिक आलुको लागि प्रतिस्थापन गर्नुहोस्। गाजर समेत यो राम्रो देखिन सक्छ ...
मारिया क्याम्पोस पेरेज भन्यो
नमस्कार म दूध खडा गर्न सक्दिन। म यो बिना गर्न सक्दछु वा के मैले यसलाई केहि प्रतिस्थापित गर्नुपर्दछ?
मारिया क्याम्पोस पेरेजलाई जवाफ दिनुहोस्
टोनी साल्गुएरो विलालोबस भन्यो
मलाई थाहा छैन यदि तपाईं वाष्पीकरण गरिएको दुध मनपराउँनुहुन्छ, मलाई लाग्छ कि यो यसको लागि वा क्रीमको लागि प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ, त्यहाँ तरकारी छ जुन राम्रो परिणाम दिन्छ। मलाई डिशबाट फ्याट हटाउन सामान्य क्रीमको सट्टामा यसलाई प्रतिस्थापन गर्दछ र यसले मलाई राम्रो नतिजाहरू दिन्छ। म आशा गर्छु कि यसले तपाईलाई मद्दत गर्दछ।
टोनी साल्गुइरो Villalobos लाई जवाफ दिनुहोस्
म दुधको स्वाद लिन सक्दिन। र उही चीज क्रीमको साथ हुन्छ। मैले बुझें कि तिनीहरू क्रीम गाढा बनाउन दूध वा क्रीम प्रयोग गर्ने हुन सक्छन्? के म बढी आलु राख्न सक्छु?
मारिया क्याम्पोस पेरेज तरकारी ब्रोथको साथ बदल्नुहोस्, यो तपाईंलाई राम्रो पनि देखिनेछ
ग्रेस गिला बैरोस डे ला रोजा भन्यो
धेरै राम्रो अनिता, कति प्यारी ??????
ग्रेस ग्ला बैरोस डे ला रोजालाई जवाफ दिनुहोस्
एरिका एस्क्रिब मार्टिनेज भन्यो
तर के तपाई त्यो मन पराउनुहुन्छ? ठीक छ, म अन्य कुराहरु लाई रुचाउँछु
एरिका एस्क्रिब मार्टिनेजलाई जवाफ दिनुहोस्
यो मलाई लागी एक शानदार संयोजन हो, मलाई यस्तो लाग्छ कि यो क्रीम हुनुपर्छ जुन बच्चाहरू र वयस्कहरूले मनपराउँदछन्। के यो तातो र चिसो दुवै राम्रो छ?
हो, घरमा मेरा साना बच्चाहरूले रमाइलो खाए 😉 यो चिसो वा तातो छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा ... यो दुवै तरिकाहरूमा स्वादिष्ट हुन्छ, जाडोमा यो तातो र गर्मीको चिसोमा महसुस हुन्छ, तर यो तपाईंलाई कसरी उत्तम लाग्छ।
तपाईं मलाई बताउनुहोस् 😉
मार ग्यालन भन्यो
मैले भर्खरै यो गरें आज रात, महान !!!!
Mar Galián लाई जवाफ दिनुहोस्
राम्रो, मार्च !!!
लोरेना डी पाउला भन्यो
मैले यो प्रयास गरेको छु र यो धेरै राम्रो छ, मेरा छोरीहरूले यसलाई मन पराए! उनीहरूका लागि ब्रोकाउली खानको लागि कुनै "झगडा" छैन
Lorena De Paula लाई जवाफ दिनुहोस्
म कत्ति खुसी छु, लोरेना 🙂 धन्यवाद !!
तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि तपाईले कस्तो प्रकारको स्याउ प्रयोग गर्नुभयो।
म गोल्डन प्रयोग गर्दछ तर तपाईं अर्को विविधता पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
गोंजालो मार्टिनेज एन्ड्रेस भन्यो
नमस्ते, म गोंक्सो हुँ। म जान्न चाहन्छु कि तपाईं पहिले ब्रोकली पकाउनुहुन्छ वा यसलाई यस्तै थप्नुहुन्छ। धन्यवाद।
गोन्जालो मार्टिनेज एन्ड्रेसलाई जवाफ दिनुहोस्
यो गिलासको जस्तै गुलदस्तामा खन्याइन्छ। म आशा गर्छु तपाई लाई यो मन पर्छ 🙂
धन्यबाद आज म यो तयार गर्नेछु र यसको बारेमा तपाईलाई बताउनेछु। शुभकामना।
धेरै धेरै Ascen धन्यवाद। शुभकामना।
म कति खुसी छु, गोन्जालो। धन्यवाद!
म मेरो थर्मोमिक्सको enjoy दिनदेखि मजा लिदै छु?
मैले चिचिनको सूप बनाएँ, इटालियन स्क्वाश हामी तिनीहरूलाई चिलीमा कल गर्दछौं, मेरो पति र मेरा छोरीहरू खुशी छन् !!!
यो ब्रोकोली र स्याउ सूप, सुनौलो स्याउ सब भन्दा बढी पहेलो छ, सही? ठेठ हरियो हरियोको साथ, यो मलाई राम्रो देखिनेछ?
म तपाईंलाई धन्यवाद दिन सक्दछु
हो, हो, सुन भनेको तपाईंले भन्नुभएको हो। तर यो सबै प्रकारहरूमा राम्रो देखिनेछ 🙂
राम्रो! नयाँ Thermomix! ठिक छ, तपाइँलाई थाहा छ, तपाइँसँग हामीलाई चाहिएको चीजहरू यहाँ छन्। हामी प्रत्येक दिन पकवानहरू प्रकाशित गर्दछौं ताकि तपाईं विचार विचारहरूको अभाव हुनुहुनेछ
नमस्कार, मैले यसलाई 90 ० डिग्रीमा राख्नुपर्‍यो, किनकि १०० मा, मेरो दुध बढेको छ र यो बढेको छ।
कस्तो क्रोध! तापक्रम कम गर्न तपाईंले राम्रो गर्नुभयो। कहिलेकाँही केहि रेसिपीहरूसँग यो हुन्छ। मलाई लाग्छ यो सामग्रीको आकारको कारणले हुन सक्छ ...
मैले भन्नु पर्छ कि ब्रोकलीको साथ नबनाई र एक हजार तरिकाहरू पत्ता लगाएर पनि यसलाई मेरो आहारमा समावेश गर्न म सक्षम छु मैले यसलाई प्रेम गरेको छु! नुस्खामा बधाई छ! तपाईंले मलाई यो महसुस नगरीकन पनि लैजानु भयो! त्यसैले म पहिले नै राम्रो तरीकाले संरक्षक को नुस्खा छ !!! ?
महान, एस्तर !! मलाई तपाईंको टिप्पणी मनपर्‍यो 🙂
हरियो सास र ककल्सको साथ आर्टिचोकस
रगत सॉसेजको साथ युवा ब्रड बीनहरू